को-रोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला सबैले जान्नुपर्ने कुरा, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने त ! – Dailny NpNews
को-रोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला सबैले जान्नुपर्ने कुरा, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने त !
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०२, २०७८ समय: १८:३६:५६
को-रोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला सबैले जान्नुपर्ने कुरा, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने त ! को- रोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा अस्पतालहरू भरिएको र शय्या पाउन गाह्रो भएको गुनासाहरू आइरहेका छन्। कतिपय को- भिडका बिरामीहरू घरमै बसिरहेका छन् । उसोभए कस्तो अवस्था आए अस्पताल जाने त ? डा. पुनका अनुसार पल्स अक्सिमिटर उपकरणको सहयोगमा घरमै शरीरमा अक्सिजनको तह कति छ भन्ने कुरा बिरामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।
“अस्पताल जानुपर्ने नजानुपर्ने एउटा एकदम ‘क्रि-टिकल डिसिजन’ (संवेदनशील निर्णय) जुन भन्छ त्यो त्यसले (अक्सिमिटर) देखाउँछ। अर्को कुरा त्यो (अक्सिमिटर) कसैसँग भएन भने श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, अत्यधिक खोकी लागेकोलाग्यै गर्ने, बान्ता आउन थाल्यो, पखाला लागेकोलाग्यै गर-याे भने उहाँहरू अस्पताल पुग्नुपर्छ वा कम्तीमा पनि चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ,” उनले भने । को -रोना भाइरसको सङ्क्रमण जटिल चरणमा जाँदा अक्सिजन कम हुने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार अक्सिजन कम हुँदा निश्चित उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
को- रोना भाइरस लागेका कतिपयमा भाइरल नि-मोनिया पनि देखिने गरेको पाइएको भए पनि त्यसलाई कुनै एन्टिबायोटिक वा अन्य उपचारबाट निको पार्न नसकिने उनको भनाइ छ। भाइरल निमोनिया भएका अधिकांश मानिसहरूको शरीर आफैँले प्रतिरोध गर्ने सुवेदी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी को-भिड-१९ को परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पनि नदेखिए पनि लक्षण हुँदा वा गाह्रो महसुस भए ११३३ र १११५ नम्बरको हटलाइन सेवामा सम्पर्क गर्न सकिने बताउँछन्।
औषधि सेवन कसरी गर्ने ? को- भिडबाट बिरामी भएकाहरूले घरमै बस्दा सिटामोलसहित छातीमा सङ्क्रमण नहोस् भनेर विभिन्न औषधि सेवन गरिरहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् को-भिडका बेला निश्चित किसिमका समस्या हुँदा सेवन गर्न सकिने औषधि भनेर सूची नै सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ तर चिकित्सकहरूको सुझावबिना कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्न नहुने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
“कसैले भनेकै आधारमा नखानुहोस्। एउटा फर्म्याटजस्तो सामाजिक सञ्जालमा घुमेको देख्छु। यो कतिपयले खाँदा फाइदाभन्दा पनि बढी मात्रामा बेफाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् जसले गर्दा को-रोना भाइरसले होइन कि स्वयं त्यो औषधि खाँदा नकारात्मक परेर बिरामी हुनु नपरोस्,” उनले भने ।